#Dhammanteen si isku mid ah Waxaan Walaac uga Qabnaa qabsoomidda doorashada 2020 - Get Latest News From Horn of Africa
#Dhammanteen si isku mid ah Waxaan Walaac uga Qabnaa qabsoomidda doorashada 2020
By axadle On Mar 2, 2019 Last updated Mar 30, 2019
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa shaaca ka qaaday in kulamo uu la yeeshay siyaasiyiin badan lagu muujiyey walaac laga qabo doorashada 2020 iyo qorshe ay dowladda rabto inay waqtiga ku korarsato.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay inaysan jirin cid aqbalaysa hal maalin oo mudo kordhin ah, islamarkaana muddadii sharciga ahayd ee hogaanka dawlada ay ka harsan tahay in ka yar labo sano.
Qoraal arrintaas ku saabsan oo uu Cabdiraxmaan soo dhigay bartiisa facebook hoos ka aqri.
Labadii toddobaad ee ina dhaafay kulamo aan la yeeshay siyaasiyiin isugu jira madaxweynayaal dawlad Gobolleedyo xilka haya iyo kuwo hore, hoggaamiyayaal xisbiyo, xildhibaanno labada aqal ka tirsan iyo xubno beesha caalamka ka mid ah; waxey dhammaantood si isku mid ah walaac uga qabaan qabsoomidda doorashada 2020. Sababtuna waa in aysan muuqan saansaan dalka doorasho looga qabanayo.
Waxaan kaloo warkeeda helaynaa in ay jiraan isku day Villa Somalia ku doonayso mudo kodhin. Ma aha in waqti la isaga lumiyo hawl aan miro dhal lahayn oo horayna u dhicin, haatanna suuragal noqon doonin. Ma jirto cid aqbalaysa hal maalin oo muddo kordhin ah.
Muddadii sharciga ahayd ee hoggaanka dawlada waxaa ka harsan in ka yar labo sano, weli waxay haysataan fursad sharciyada hoggaan loo oggolyahay. Waxaan uga digaynaa isku dayga muddo kororsiga ah in uu meesha ka saarayo sharciyadda iyo aqoonsiga hoggaan. Waxaa taa beddelkeeda kula talinaynaa in ay ku mashquulaan ka miro dhalinta
1- In Amniga wax laga qabto, dawladuna la timaado qorshe iyo abaabul Alshabaab wax looga qabanayo, nafta iyo hantida shacabka lagu badbaadiyo
2- Heshiis laga gaaro hannaanka doorashada 2020 ka.
3- qabyo tirka dastuurka KMG ah.
4- In dib loo billaabo wadahadalkii Somalia iyo Somaliland